Akụkụ ndịda nke Chile dị mkpa iji ghọta mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Akụkụ ndịda nke Chile dị mkpa iji ghọta mgbanwe ihu igwe
Dịka e kwuru ọtụtụ oge, mgbanwe ihu igwe na-emetụta akụkụ ọ bụla nke ụwa. N'ebe ụfọdụ, n'ihi ohere ha ma ọ bụ ọnọdụ ha, e nwere mpaghara ndị na-adịkarị mfe maka mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na ndị ọzọ na-eguzogide ọgwụ.
Mpaghara Chile nke Magallanes na Antarctica, na oke ndịda America, awade pụrụ iche ọnọdụ na-amụ mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Nke a bụ ihe sayensị ga-ewere iji nweta nsonaazụ kacha mma yana nnukwu nghọta banyere omume na nsonazụ.
1 Mpaghara ebe ndịda nke mbara ala
2 Mgbanwe ihu igwe na nyocha gburugburu ebe obibi mmiri
3 A gha echekwa usoro okike mmiri
4 Mmụta gburugburu ebe obibi dị ka ngwa ọrụ azịza
Mpaghara ebe ndịda nke mbara ala
Ọ dị kilomita 3.000 n'akụkụ ndịda Santiago obodo Punta Arenas. Ọ bụ ya bụ epic nke ọrụ sayensị ndị na-arụ ọrụ na Magellan na Antarctica. Ọ bụ mpaghara ndịda nke mbara ụwa ahụ ma na-eru ogo ntozu oke iji bụrụ osisi subantarctic na Antarctic.
Mgbanwe ihu igwe na nyocha gburugburu ebe obibi mmiri
Ime mpaghara ndị a ka ọ bụrụ sayensị na teknụzụ nke ụwa niile na-anabata eziokwu ahụ na ihe dị ugbu a nke mgbanwe mgbanwe ihu igwe na-emetụta mpaghara nke Lọ Ọrụ Maka Nnyocha Di omimi na High Latitude Marine Ecosystems (IDEAL).
Me ihe ọmụmụ na nyocha na mpaghara a site na echiche sayensị na-enye ohere ịnweta ọtụtụ ozi bara uru metụtara mgbanwe niile na-eme n'ihi mgbanwe ihu igwe. Otu n'ime ihe ọmụmụ emere na mpaghara a bụ ịchọpụta etu mgbanwe ihu igwe si emetụta gburugburu mmiri. Nrịbawanye na okpomoku, ikuku dị elu nke CO2 na mbara igwe, na-ebute oke osimiri. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ ịcha ọcha coral, mmiri acidification na mbibi nke ebe obibi nke ụdị ndị dị mfe mgbanwe na gburugburu ebe obibi.
Kpọmkwem, Ebe kachasị emetụta bụ ndị a ga-amụrịtakwu, ebe ọ bụ ha bụ ndị na-enye ọtụtụ ozi gbasara etu mgbanwe nwere ike isi metụta ụdị ndị bi ebe ahụ. N'ihi nzaghachi ka ukwuu na mgbanwe gburugburu ebe obibi, enwere ike ịmekwu nnwale na ule iji ghọtakwuo ihe ndị ga-esi na ya pụta.
A gha echekwa usoro okike mmiri
Inwe ezigbo nsonaazụ sitere na nnwale na mpaghara ndị a na-enye ndị ọchịchị ohere ịme mkpebi ụfọdụ nwere ike ichebe usoro okike nke mmiri. Ọ bụrụ na anyị nwere ihe ọmụma ma ọ bụ na-erughị eru banyere nsonaazụ nke mmetụta ụfọdụ nwere ike inwe na otu ụdị, anyị nwere ike ịme ihe iji kpuchie ụdị a.
Ihe atụ nke ihe a niile bụ oflaghachi glaciers na ụfọdụ fjords na mpaghara. Mmetụta a na-eme ka mmiri dị ọcha na mpaghara thawed banye na gburugburu mmiri ma gbanwee kemịkal na ihe ndị dị ndụ. Umu anumanu ndi choro itinye nnu di ndu, agagh enwe ike iguzogide mgbanwe ndia ma gha anwu.
Ebe ọ bụ na ọ siri ike ịlaghachi na nsogbu mgbanwe ihu igwe, Ihe ọzọ a ga-eme bụ ịchọta ihe ngwọta maka nsogbu ndị na-ebilite. Ihe ngwọta nwere ike inyere aka imeghari gburugburu mmiri maka mgbanwe ihu igwe.
Mmụta gburugburu ebe obibi dị ka ngwa ọrụ azịza
Kụziri ụmụaka ka ha buru ọrụ maka gburugburu bụ ngwa ọrụ iji nwee ike idozi nsogbu gburugburu ebe obibi nke sitere na mgbanwe ihu igwe. Ekwesịrị ikwupụta na, ọ bụrụ na anyị azụ ndị nwere ike nyocha, nyocha na ịme mkpebi gbasara gburugburu ebe obibi, Anyị ga-akwalite mmata zuru ụwa ọnụ maka ịkwanyere gburugburu ebe obibi ùgwù. Ihe a niile ga-enye aka n’ụzọ ka mma iji belata nsonazụ mgbanwe ihu igwe.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ndị na-eto eto sonye na sayensị, anyị kwesịrị agụmakwụkwọ gburugburu ebe obibi. Eziokwu ahụ bụ na Chile nwere na mpaghara ndịda ndị kwesịrị ekwesị maka usoro Antarctic na subantarctic maka nyocha nwere ike iduga ntoputa nke ihe ndị sitere na mba ndị ọzọ na ndị otu mba dị iche iche, dị ka ọ dị na nchọpụta mbara igwe na ugwu nke mba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, High Latitude Marine Ecosystem Dynamic Research Center (IDEAL) bụ otu n'ime ụlọ ọrụ sayensị kachasị arụ ọrụ na mpaghara ahụ, ya na otu ndi oru nyocha 25 site na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Akụkụ ndịda nke Chile dị mkpa iji ghọta mgbanwe ihu igwe
NASA chọpụtara mbara ala asaa nwere ike ibute ndụ
Mmiri Arctic na-akụda ala na Jenụwarị